Fractional Co2 Laser Factory - China Nkeji nke Co2 Laser Manufacturers, Suppliers
Elu àgwà Portable Co2 F ...
Fractional Co2 Laser Isi ...
1060nm 4 ejiri Diode Lase ...
Picosecond Laser igbu egbugbu ...
High Quality Portable Co2 Fractional Laser Vaginal Tightening Scar Mole Skin Rejuvenation Machine
Smart ịgụ isiokwu isi, mfe ọrụ na-azọpụta oge. Urgicalwa ahụ isi tumadi na-eji maka ịcha akpụkpọ mkpado na ingrown mbọ, compound nevus na intradermal nevus wdg Gynecology isi1, 360 Celsius na 90 Celsius ọgwụgwọ, Gold Plated vertebral body laser nwere elu reflectivity na mma ọgwụgwọ mmetụta. Gynecology heads2, vulia labia ọgwụgwọ, Labia whitening Melanin iwepụ. Ugbo elu nke ikuku na-eji ihe eji emeputa ihe di elu, ihe eji edozi ya na 24.
Smart ịgụ isiokwu isi, mfe ọrụ na-azọpụta oge. Urgicalwa ahụ isi tumadi na-eji maka ịcha akpụkpọ mkpado na ingrown mbọ, compound nevus na intradermal nevus wdg Gynecology isi1, 360 Celsius na 90 Celsius ọgwụgwọ, Gold Plated vertebral body laser nwere elu reflectivity na mma ọgwụgwọ mmetụta. Gynecology heads2, vulia labia ọgwụgwọ, Labia whitening Melanin iwepụ. Mgbapu ụgbọelu n'èzí na-eji ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe eji edozi ọla edo 24, na-eme ka njikọ bụrụ ihe a pụrụ ịdabere na ya ...
Fractional Co2 Laser Machine Na Glass tube
Isi ọgụgụ isi ọgụgụ isi, ọrụ igodo ọhụrụ, pịa igodo M ka ịgbanwee eserese, pịa ogologo sekọnd atọ iji kwadebe, '+' nwere ike ịbawanye ogo nke ihe oyiyi ahụ, yana '-' iji belata ogo ihe oyiyi. Ọ dị mma maka ndị ahịa iji rụọ ọrụ. Laser emitter: Laser dị na USA, Ike kachasị elu nwere ike iru 100W, Ndụ ọrụ: Oge 2000. Ihe nkpuchi ohuru ohuru nwere ike ime ka obi ghara iru ya. 7 nkwonkwo articulated ogwe aka, 360freely ọrụ, ukwuu mbenata ike los ...